နီဟိုနီယမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကော့ပါနီဆီယမ် ← နီဟိုနီယမ် → ဖလရိုဗီယမ်
အတည်ငြိမ်ဆုံး နီဟိုနီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
syn 1.4 ms α 11.68 274Rg
syn 73 ms α 10.63 278Rg
syn 75 ms α 10.12 279Rg
syn 0.91 s α 10.00 280Rg
syn 4.2 s α 9.74, 9.48 281Rg
syn 9.5 s α 9.63 282Rg
syn 5.5 s? α 10.29 283Rg
syn2s? α 9.67 286Rg
နီဟိုနီယမ် (Nihonium) သည် ဓာတုဗေဒဒြပ်စင်တမျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်း၏သင်္ကေတမှာ Nh ဖြစ်ပြီး အက်တမ်အမှတ်စဉ် (atomic number) ၁၁၃ ဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်စင်ကို အက္ကသယ်လီယမ် (eka-thallium)ဟုလည်းခေါ်ကြသေးသည်။ Americium-၂၄၃ အက်တမ်အား calcium-၄၈၏အိုင်းယွန်းများနှင့်ပြိုကွဲပျက်စီးစေခြင်းမှ ၎င်းဒြပ်စင်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နီဟိုနီယမ်ဆိုသည်မှာ ဂျပန်အမည်တစ်ခုဖြစ်သည့် နီဟွန်ဆိုသည်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းဒြပ်စင် ပြိုကွဲပျက်စီးချိန်၌ ဖြစ်ပေါ်လာသော နီဟိုနီယမ် ဒြပ်စင်၏အက်တမ်လေးခုတို့သည် ၁/၁၀ စက္ကန့်ထက်နည်းသောအချိန်အတွင် နီဟိုနီယမ် ဒြပ်စင်၏အက်တမ်များအဖြစ်သို့ ပြိုကွဲပျက်စီးသွားသည်။ ၂၀ဝ၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ဂျပန်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းတခုမှ ၎င်းဒြပ်စင်ကိုဓာတ်ခွဲခန်း၌ အောင်မြင်စွာ ထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့ကြောင်းကြေညာ ခဲ့သည်။ ၎င်းဒြပ်စင်၏ဂုဏ်သတ္တိများသည် Thallium(Th) နှင့် Indium(In) တို့၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ဆင်တူနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းမျှော်လင့်ထားကြသည်။
Ununtrium အမည်ဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောဒြပ်စင်အမှတ် ၁၁၃ အတွက် သိပ္ပံဆိုင်ရာအမှတ်အသားအဖြစ် Latinate ဘာသာအရ “one-one-three-ium” (“ium” beingastandard ending for element names)ဟုခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ယင်းဒြပ်စင်အမည်အား နီဟိုနီယမ် ဟု တရားဝင်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ခုနှစ် မတ်လတွင် ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုးမြို့၌ အမည်ပေးအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ကာ ဂျပန်အိမ်ရှေ့မင်းသားကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ နီဟိုနီယမ် သည် transuranic (transuranic elements=ransuranium element, chemical element with an atomic number greater than 92 (which is the atomic number of uranium)) ဒြပ်စင်များကဲ့သို့ဓာတ်ခွဲခန်းမှသာထုတ်ယူရရှိနိုင်သည့်ဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။
နီဟိုနီယမ် ဒြပ်စင်၏သက်တမ်းဝက်(half-life)သည် အလွန်တိုသောကြောင့် ပတ်ဝန်ကျင်သို့ ၎င်းဒြပ်စင်၏သက်ရောက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာမလိုပါ။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Haire
↑ ၃.၀ ၃.၁ Seaborg, Glenn T. (c. 2006)။ transuranium element (chemical element)။ Encyclopædia Britannica။ 2010-03-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ "Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements" (1981). Journal of Physical Chemistry 85 (9): 1177–1186. doi:10.1021/j150609a021.
↑ "Predicted Properties of the Super Heavy Elements. I. Elements 113 and 114, Eka-Thallium and Eka-Lead" (1969). The Journal of Physical Chemistry 74 (5): 1127−1134. doi:10.1021/j100700a029.
↑ "First principle study of the structural and electronic properties of Nihonium" (2020). MRS Advances: 1–9. doi:10.1557/adv.2020.159.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နီဟိုနီယမ်&oldid=722941" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။